IYiputa, isiGrike kunye neengcamango ezininzi zealfabhethi.
Ngubani Oye Wafika Nge-Alphabet?
Kude kube ngamaxesha anamhlanje, iilfabhethi yayingumsebenzi ohamba phambili ohamba phambili njengaseYiputa yamandulo. Siyazi le nto kuba ubungqina bokuqala bealfabhethi eziselunxwemeni, ngendlela yokubhala imizobo yegrafiti, yafunyanwa kwi-Sinai peninsula.
Akuninzi kakhulu malunga nalezi zibhalo ezingabonakaliyo ngaphandle kokuba mhlawumbi ziqokelelwa ngabalinganiswa abavela kwi-hieroglyphs yaseYiputa. Kwakhona kwacaca nokuba ezi ncwadi zakuqala zabhalwa ngamaKanana ahlala kwindawo leyo malunga nekhulu le-19 leminyaka BC
okanye abantu baseSemiti abahlala eYiputa kwikhulu le-15 leminyaka BC
Kungakhathaliseki ukuba kunjalo, bekungekho ukuvela kwempucuko yaseFenike, iqoqo lemizi-dolophu elandelwa ngaselwandle lwaseMedithera, ukuba iproto-Sinaitic isetyenziswe ngokubanzi. Kubhaliwe ukusuka kwesokudla ukuya kwesobunxele kwaye iqukethe iimpawu ezingama-22, le nkqubo ekhethekileyo iza kugqithiselwa kuyo yonke impuma empuma naseYurophu ngokusebenzisa abathengisi baselwandle abaqhuba ishishini kunye namaqela athile abantu.
Ngekhulu le-8 BC, iilfabhethi zenze indlela eya eGrisi, apho yatshintshwa kwaye yaguqulelwa ngolwimi lwesiGrike. Inguqu enkulu kunokuba ukongezwa kwezandi zomsindo, apho abaphengululi abaninzi bakholelwa ukuba babonakalise ukudala i-alfabhethi yokuqala yokwenene eyayivumelekile ukuba ibhalwe ngokucacileyo ngamagama athile aseGrike. Kwakhona amaGrike awenza nezinye iinguqu ezibalulekileyo ezifana neencwadi zokubhala ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla.
Ngeli xesha elifanayo ngasempuma, iilfabhethi zaseFenike zaziza kuqala kwi-alfabhethi ye-Aramaic, ekhonza njengesiseko seenkqubo zesiHebhere, zesiSiriya kunye neArabhu. Njengolwimi, isiAramuki sathethwa kuwo wonke umbuso wase-Neo-assyrian, ubukhosi be-Neo-babylonian kunye mhlawumbi kakhulu phakathi kukaYesu Kristu nabafundi bakhe.
Ngaphandle kwempuma ephakathi, iindawo zokusetyenziswa kwazo ziye zafunyanwa nakwiindawo zaseIndiya nase-Asia ephakathi.
Emuva eYurophu, inkqubo yesiGrike yelfabhethi yafikelela kumaRoma malunga nekhulu le-5 BC, ngokutshintshana phakathi kwezizwe zamaGrike namaRoma ezahlala kwisiqithi saseNtaliyane. AmaLatin ayenzela utshintsho oluthile lwabo, ahlalise iileta ezine aze angeze abanye. Indlela yokuguqula iilfabhethi yayiqhelekileyo njengoko iintlanga zaqala ukuyifumana njengendlela yokubhala. Ngokomzekelo, ii-Anglo-Saxon zasebenzisa iileta zaseRoma ukuba zibhale isiNgesi esidala emva kokuguqulwa kobukumkani ebuKristwini, kwaye zenza uchungechunge lweenguqu ezabe ziba sisiseko seNgesi yanamhlanje esisisebenzisa namhlanje.
Okuthakazelisayo ngokwaneleyo, umyalelo weencwadi zokuqala uye wakwazi ukuhlala ufana njengoko ezi ziguquko zeelfabhethi zaseFenike zatshintshelwe ukuhambelana nolwimi lwendawo. Ngokomzekelo, iipilisi zamatye ezili-12 ezifunyenwe kwisixeko sase-Siriya saseUgarit sasendulo, esasemva kwe-14th BC, sichaza iilfabhethi ezifana nezibini ze-Latin alphaferensi kwinqanaba elisezantsi lencwadi. Izixhobo ezintsha kwiilfabhethi zazifakwe ekugqibeleni, njengoko kunjalo kunye neX, Y, kunye neZ.
Kodwa ngelixa iilfabhethi zaseFenike zingabonwa ngokuba nguyise malunga nazo zonke iinkqubo ezibhaliweyo ngasentshonalanga, zikhona ezinye ii-alphabets ezingabuthandanga.
Oku kubandakanya isiNgesi saseMaldivian, esiboleka izinto ezivela kwisi-Arabhu kodwa zithatha ezininzi iileta zayo ukusuka kumanani. Enye enye i-alfabeti yesiKorea, eyaziwa ngokuthi yi-Hangul, edibanisa iileta ezahlukeneyo ndawonye kwiibhloko ezifana neempawu zesiTshayina zokuvelisa isilayidi. E-Somaliya, iilwimi ze-Osmanya zenzelwe amaSomalia ngo-1920 ngu-Osman Yusuf Kenadid, imbongi yendawo, umbhali, utitshala kunye nezopolitiko. Ubu bungqina bee-alphabets ezizimeleyo zifunyenwe kwiIreland ephakathi kunye nobukhosi obudala basePersi.
Kwaye xa ukhe uzibuza, ingoma yesi-alfabhethi isetyenziselwa ukunceda abantwana abancinane bafunde i-ABCs yabo kuphela yeza malunga nangoko kutshanje. Ekuqaleni i-copyright yomvakalisi ongumculo waseBoston uCharles Bradlee phantsi kwesihloko esithi "I-ABC: Umoya waseJamani onobomi be-Flute ne-Easy Compatible ye-piano Forte," umculo ulandelelwa emva kweenguqu ezilishumi elinesibini "Ah u dirai-je, Umama, "uphando lwepiyano olubhalwa nguWolfgang Amadeus Mozart.
Imvumi efanayo isetshenziswe kwakhona kwi "Twinkle, Twinkle, Little Star" kunye ne "Baa, Baa, Iigusha ezimnyama."
Iifayile Zisebenza njani
Imbali emfutshane yeeRobhothi
Ubomi bukaThomas Jefferson njenge-Inventor
Ukubambisana kwetenzi lwesiTaliyane: Iindwendwe
Imiqathango ye-Hardy-Weinberg Equilibrium
Babengubani abaseAsiriya eBhayibhileni?
Imbali Yobani Abafihla I-Cereal Breakfast
Ziziphi ii-Movie eziphambili ze-Julia Roberts?
I-Tarot Card isasazeka
Ukusebenzisa i-Golf Wedge
Iingcebiso ezi-5 ze-Backstroke I-Better Start
Uhlaselo Oluphefumulelwe "I-Star-Spangled Banner"
Indlela Yokuthi "Ufuna" okanye "Isifiso" ngesiJapan
"Umntu Omdala kakhulu Unamaqhawe amakhulu": Isikhokelo soFundo
Yintoni Abaqhubi Bemiqathango?
5 I-Intanethi yeeNtlalo zeeNtlalo zoLuntu zeeKlasini zonke
Indlela yokuCwangcisa iMida
Ukubulawa kukaColonel Behl
Ukufumanisa iNgqungquthela yombhalo kwiSibongo seZithathu
Inkcazo yokwandisa iMigaqo-mali yeMali